Yini i-Induction Heating Coil & Inductor?
Insimu yamagnetic ehlukene edingekayo yokushisa okufakelwayo yenziwa ekufakeni ukushisa kwe-induction ngokusebenzisa ukugeleza kwe-AC (ukushintshaniswa kwamanje) ku-coil. Ikhoyili ingenziwa ezinhlobonhlobo nezinkinobho eziningi ukuze kusetshenziswe ngokwezifiso isicelo esithile. Amakhoyili angahle avela kumakhoyili amancane akhiwa ngamatayipi ensimbi ayetshenziselwa ukushisa okuncane kakhulu ezinxenyeni ezincane kakhulu ezincwadini ezifana nokufudumala nokushisa kwe-ferrle kuya emihlanganweni emikhulu ye-coil ye-tubing yethusi eyayisetshenziswa ezinjengezinsimbi zokushisa zensimbi nokushisa kombhobho.
Iyini ukubaluleka kokufakwa kwe-coil yokushisa (inductor)?
Ukwakhiwa kwe-coil ye-induction ingenye yezici ezibaluleke kakhulu ohlelweni lokushisa lokufakelwa. Ikhoyili yinkambiso yenkambiso ukunikeza umsebenzi wakho ucezu noma uhlukanise iphethini efanele yokushisa, ukwandise ukusebenza kahle kwesistimu yokulinganisa ukuthengiswa kwamandla okushisa okufakwayo, nokufeza le misebenzi ngenkathi uvumela ukukhululeka kokulayisha nokulayisha ingxenye yakho.
Izigaba Imibuzo Evame Ukubuzwa Amathegi coil induction, ukufakwa kwe-coil yokushisa, inductor, Yini i-coil induction?